“Lionel Messi waa kan ugu fiican adduunka lamana joojin karo” – Xiddig hore ee kooxda Arsenal ah – Gool FM
(Spain) 13 Dis 2019. Mid ka mid ah xiddigihii hore ee kooxda Arsenal ayaa xaqiijiyay sida ay u adag tahay in la joojiyo kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi, isagoo dhinaca kale ku tilmaamay inuu yahay kan ugu fiican adduunka.
Daafaca reer Spain iyo kooxda Real Sociedad ee Nacho Monreal ayaa wuxuu shaaca ka qaaday halista uu leeyahay xiddiga reer Argentina ee Lionel Messi.
Hadalka Nacho Monreal ayaa wuxuu imaanayaa kahor kulanka ay Sabtida barri ah ku wada ciyaari doonaan labada kooxood Barcelona iyo Real Sociedad horyaalka La Liga.
Wargeyska “Sport” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Nacho Monreal kahor kulankan waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waan ognahay waxa uu awood u leeyahay inuu sameeyo, laakiin qofna ma hor istaagi karo Lionel Messi, waa kan adduunka ugu fiican”.
“Uma oggolaan kartid inuu fikiro, sababtoo ah wuxuu sameynayaa wax alla waxa uu doonayo”.
“Marka ay kubadda ku dhex jirto labadiisa lugood, ma joojin kartid, sababtoo ah fekerkiisa aad ayuu u dhaqso badan yahay, mar walba waxaad noqon doontaa qof iskudaya inuu isagu raaco” ayuu hadalkiisa sii raaciyay xiddigii hore ee kooxda Arsenal.